ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည့်ခုနှစ်၊သမိုင်းကြောင်း - CU Mandalay
UCS(Mandalay) Student Information System
Mission and Vision of Each Faculty
Subjects of Each Faculty
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ တအုံကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအဝေးပြေး လမ်းမကြီးမှ(၂)မိုင်(၆)ဖာလုံ ကွာဝေးပါသည်။ စုစုပေါင်းဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှာ (၁၄၃.၁၈)ဧကရှိပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ကို ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက် နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦ အမျိုးအစားမှာ သံကူကွန်ကရစ် (၃)ထပ်အဆောက်အဦဖြစ်ပြီး၊ (၇-၇-၂၀၀၃)တွင် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦမှာအလျား(၅၆၉)ပေ၊ အနံ(၃၁၃)ပေ ရှိပြီး၊ ကြမ်းခင်းဧရိယာစုစုပေါင်းမှာ (၁၄၄၅၆၇)စတုရန်းပေရှိသော U ပုံစံ အဆောက်အဦဖြစ်ပါသည်။ တစ်ထပ်လျှင်(၁၄)ပေအမြင့်ရှိပြီး၊ စုစုပေါင်း အမြင့်မှာ(၅၆)ပေ(၆)လက်မ ရှိပါသည်။ ၎င်းအဆောက်အဦတွင် ပေ(၄၀×၃၀) ရှိသောအခန်းပေါင်း(၄၈)ခန်းပါရှိပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ပင်မဆောင်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ မြေနေရာ‌ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းများ စတင်ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ (၂၇-၆-၂၀၀၃)ရက်နေ့တွင် ပန္နက်တင်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၁-၇-၂၀၀၃)ရက်နေ့တွင် စက်အင်အား၊ လူအင်အားတို့ဖြင့် မြေတူးခြင်း လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး နောင်တုံ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တာ၀န်ယူတည် ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌရုံး၏ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက် နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၁/နယက(ဥ)/ စ၀-၁အရ၊ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မှ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) အဆင့်သို့ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
ကျောင်း၏ Layout Plan
(က) Building Layout Plan (ခ) Google Map Plan
Nextစတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ Timetable ဇယားကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်Next
The University of Computer Studies (Mandalay) is located near Taoh Village in Sintkaing Township, Kyaukse District, Mandalay Region. It is (2.6) Miles for from Yangon-Mandalay High Way Road. The total area of the university is (143.18) acres.
Academic Year Syllabus
ပါချုပ်ရုံးခန်း – ၀၉၄၄၄၀၄၃၄၆၅
ကျောင်းသားရေးရာ – ၀၉၂၀၅၉၆၀၄
© 2022 CUMandalay. All rights reserved.